Funda indlela yokudibanisa "i-Neiger" (kwi-Snow) ngesiFrentshi
Funda indlela yokudibanisa "i-Neiger" (kwi-Snow)
Tshela Omnye "Uqhwala" okanye "Uqhwala" ngesiFrentshi
Xa ufuna ukuxelela umntu ukuba ikhephu ngesiFrentshi, uya kusebenzisa isenzi neiger (iqhwa). Nangona le nguqulelo lwesipelingi, esenza ukuba ukufunda kube ngumngeni, kuyinto engabonakaliyo. Oko kuthetha ukuba unamagama ambalwa kakhulu okukhumbuza, okwenza le sifundo silula kuninzi.
I-Neiger Ingumntu ongeyena
I-Neiger iyenzi isenzi . Oku kuthetha ukuba umntu akakwazi ukwenza lo msebenzi.
Kunengqiqo ukuba ucinga ngako: andinako ukwenza ikhephu, awukwazi ukwenza ikhephu, kwaye akunako thina , yena , yena okanye nayiphi na isigama sesigxina ngaphandle kwe "." Oku kwenzeka kwizenzi esingazikwazi ukulawula kwaye uzakufumana loo ndlu (imvula) ilandele i-logic efanayo.
Oko kuthetha ukuthini kubafundi beFrentshi kukuba akudingeki ukuba ukhumbuze izenzi-magama zesenzi kuzo zonke izibhengezo ngaphandle kwe- il , oku kuthetha "it" kule meko. Kwakhona, akukho fom efunekayo.
Iimbambano ezibalulekileyo ze- Neiger
Nangona unesimo esincinci se- neiger ukukhunjulwa kunezenzi zentshukumo, kufuneka ukhangele iinguqu ezimbalwa kwimigqaliselo yayo.
Le yenguqu yesipelingi isenzi. Uya kuphawula ukuba xa isenzi isitofu ( neig -) sidinga ukuphela okuqala nge- e , ifakwe phakathi kwe-stem kunye nokuphela. Oku kwenziwa ukwenzela ukugcina i-soft soft g ngoko ithetha ngathi "i-gel" kunokuthi "igolide."
Ishati yokuqala kukunika iifom ezifanelekileyo ze- neiger kwisimo sengqondo. Nangona ixesha langoku nelizayo lisebenzisa iziphelo eziqhelekileyo , utshintsho lwesipelingi lufunekayo ngexesha elidlulileyo. Ishati iya kukunceda ufunde ukuba il neige ithetha ukuba " ikhephu ," il neigera ithetha ukuba "kuya kuba nekhephu," kwaye i- neigeait ithetha ukuba "ikhephu."
neige neigera i-neigeait
Kusenokwenzeka ukuba ufune ukubuza ukuba ingaba ikhephu iyayikhupha, yintoni xa i-subjunctive iyanceda. Ukuba, nangona kunjalo, kuya kuba yikhephu kuphela ukuba kukho into eyenzekayo (ukushisa kwehla, mhlawumbi), ngoko uya kusebenzisa umqathango . Kwiimeko ezininzi, uzakufumana kuphela ukuhamba ngokulula nokungapheleli kwiFrentshi ebhaliweyo.
neige neigerait neigea neigeât
Inxaxheba yeNiger yangoku
I- participant inxaxheba ye- neiger idinga utshintsho lopelo. Kungenxa yokuba isebenzisa ukupheliswa kwentsimbi kwaye oku kuvelisa igama elingenanto .
I-Neiger kwixesha elidlulileyo leComplete
Ngaphandle kokungafezekanga, ungasebenzisa kwakhona i- passé compé ukuba sele sele ikhephu. Lexesha elidlulileyo lexesha ludinga ukuba i- neiger idlulele i- neigé kunye nesenzi (okanye incedisi) isenzi.
Ukwenza oku, qalisa ngokudibanisa ibhola kwi- il ibonisa ixesha, uze wongeze neigé : il a neigé .
Ukutyelela kweReims: Iindaba eziqhelekileyo zesiFrentshi-isiXhosa ezimbini
Uluhlu lweeMpawu eziqhelekileyo zesiMatarin zesiShayina
I-French Essential - L'Essentiel
Indlela yokusebenzisa i-Visual Dictionary yabafundi beNgesi
Indlela yokwandisa (okanye ukuncipha) isimemo ngesiFrentshi
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Joint' ('Ukujoyina')
Ndingayahlula njani iCatyuli kuManzi eManzini olwandle?
I-Post-and Post-WWII Men's I-Yeavelin Outrow World Records
Iimpazamo ezili-10 eziphambili zeFrench
I-80s Iingoma eziphezulu ze-American Arena Rock Rock Uhambo
Indlela yokudlala ifomathi yeGreensomes Golf
Ukuphela kweziPhuculo: Iiperiod, iiMark Marks, kunye neziPhulo zokuKhupha
Itheyibhile yeTebula yeTable - Iimpawu zoKhuselo zanamhlanje zokudlala ngePlants